トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Koa dia tsy misy mifamatotra amin'ny fanahy vady? Ahoana no azo mifatotra?
Soul vady, satria ny zavatra tsirairay no nahasarika ny fanahy, koa matetika, raha nihaona fa dia ny hanambady sy ny fampandrosoana tahaka ny fifandraisana raha ankizilahy na ankizivavy. Na izany aza, dia tsy fanahy vady voatery ny fanambadiana mpiara-miasa.
mpanohitra ny lahatra fa Meguria 'matetika eo amin'ny fiainany teo aloha dia efa eto anatrehan'Andriamanitra ny fanambadiana no naorina. Noho izany antony izany, dia vady fanahy Azo nieritreritra toy ny tsy vady sy izay mety.
Ankoatra izany, raha samy izy no mifandray amin'ny alalan'ny fifamatorana lalina, dia ny olona sasany izay tsy manao manokana momba ny endriky ny fanambadiana. Koa azo atao ny hihaona fanahy vadiny dia tsy azo ihodivirana fa efa nahasarika lahatra, na hanana niala teo izy hankany amin'ny fampakaram-bady no miakatra ho any aminareo.
raha tanteraka izay te-hanambady olona * vady, dia zava-dehibe foana maika ny hevitra ilaina ho amin'izany tanjona. Ao amin'ny
mba mifandray amin'ny fanahy
vadiny, ho lasa ho fanahy mifamatotra amin'ny vadiny, inona ny hevitra avy ianao?
? fanahy vady
fanahy vady dia tsy misy ny olona iray dia olona nanorina fifandraisana lalina eo amin'ny fiainana teo aloha, koa ny olona izay nanao sonia isaky ny fatorana mafy koa raha ny fanovana ny fifandraisana. Ny fifandraisana ihany koa, ankoatra ny amin'ny mpivady mety ho fianakaviana na namana akaiky, mpifaninana. Noho izany antony izany, fanahy vady dia tsy voatery ho olona iray. Izany no antony tsy misy olona mety ho tojo na eo amin'ny fotoana izao ny fiainana.
? fanahy vadiny hisambotra ny aura fihaonana
rehefa hihaona fanahy vadiny dia indraindray antsoina hoe ny fotoana ny fomba fiainany lasa tsara sy mavitrika. , Ohatra, aho nahita mahafa-po, toy ny asa sy ny fialam-boly ao, toy ny tonga fanamby amin'ny hafa lamaody ary hatramin'izao, dia ny andro izay efa niseho zavatra angovo ao tenanao. Aoka ny misambotra mba tsy tara izany fambara.
fanahy vady ho fantany fa dia lalina mifandray amin'ny _-mpiara-miasa dia fifandraisana izay mitombo amin'ny tsirairay poloney ny fanahy amin'izy samy izy. Rehefa nihaona tamin'ny olona izay toa olona * vadinao, dia aoka ny saina fa mifatotra ny vahoaka sy tsaina lalina. Ny fanamafisana ny fifandraisana ara-panahy noho ny fifandraisana ara-batana, ary manao ny fahatsapana ny fifanakalozana herin 'ny tsirairay, dia afaka hitombo bebe kokoa ny fatorana.
? Rehefa hihaona tsara fanahy
vady izay niseho tamin-ny fiovana lehibe, dia voalaza fa misy maro, rehefa nijoro teo amin'ny fiovana lehibe teo amin'ny fiainako izay mandeha. Tamin'izany andro izany, na nampindrana hery ny, ny olona izay na masaka fahafahana hiova be ny fomba mandeha manomboka izao, mba at? aoriana fifamatorana ara-panahy lalina, satria maro ireo lamina hanohy miara-mandeha ela manambady izany. Rehefa hita ilay olona izay nanova ny fiainako, azafady hankamamy ny fifandraisana.
ny tsara foana feno hery mba hitandrina tanky
soulmate, matetika avy amin'ny lasa fiainana sy ny teo aloha dia mpiara-miasa izay efa imbetsaka fihaonana, no fifandraisana misy eo samy izy dia nanintona mafy ny fanahy. Na izany aza, raha tsy ny toetry izay manenjana hery ampy ny fanahy, fa ny mpanohitra koa fa ny fanahy dia tsy afaka ny hisambotra.
Noho izany, dia lasa tsara foana eo amin'ny fiainana andavanandro, dia ho zava-dehibe ny hisarihana ny fanahy vady hitandrina ny hery rehetra.
Rehefa hihaona amin x000D_ fanahy vady hoe, izany no ilazana fa misy maro, rehefa nijoro teo amin'ny fiovana lehibe teo amin'ny fiainako izay mandeha. Tamin'izany andro izany, na nampindrana hery ny, ny olona izay na masaka fahafahana hiova be ny fomba mandeha manomboka izao, mba at? aoriana fifamatorana ara-panahy lalina, satria maro ireo lamina hanohy miara-mandeha ela manambady izany. Rehefa hita ilay olona izay nanova ny fiainako, azafady hankamamy ny fifandraisana.